ဂျပန်ရိုးရာဟင်းလျာများ | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | gastronomy, ဂျပန်
ငါ သဘောကျတယ်။ ဂျပန်အစားအစာခရီးသွားချိန်တိုင်း နဲ့ ခဏတာ ကိုယ့်မြို့ထဲမှာ နေရတာ အရမ်းကြိုက်တဲ့ အရာပါ။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဆူရှီအပြင် အခြားသော ဂျပန်ဟင်းလျာများပါ လူကြိုက်များလာခဲ့သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဂျပန်ရဲ့ ပုံမှန်ဟင်းလျာများ ဆူရှီနဲ့ ပတ်သက်တာ မဟုတ်ဘူး။ အရမ်းအရသာရှိတဲ့ ဟင်းပွဲတွေအများကြီးရှိတယ်။ ထို့ကြောင့် သင့်မြို့တွင် ခရီးသွားခြင်း သို့မဟုတ် ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်ကောင်းတစ်ခုကို ရှာဖွေနိုင်လျှင် တုံ့ဆိုင်းမနေပါနဲ့။ စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ ပြောပြီးပြီ။
6 Shabu - ရှာဘူ
10 Ramen ခေါက်ဆွဲတ
ဂျပန်ဟင်းလျာသည် အလွန်ရှေးကျပြီး အခြေခံအားဖြင့် စားသုံးသော ဟင်းလျာဖြစ်သည်။ ထမင်း၊ ငါး၊ ကြက်သားနှင့် ဝက်သားတို့ကို အခြေခံထားသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ခေါက်ဆွဲကို ညီမျှခြင်းထဲကို ထည့်ပါတယ်၊ တချို့မျိုးကွဲတွေမှာ အနံ့နဲ့ အရသာတွေက ကျွန်တော်တို့သုံးနေကျနဲ့ အရမ်းကွာခြားပါတယ်။
ဆူရှီသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက လူကြိုက်များလာသော်လည်း ၎င်းသည် ဂျပန်ဟင်းလျာများ၏ အကောင်းဆုံး ထပ်လောင်းဖြစ်လာရန် ဝေးကွာလှသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် 20 လောက်က ငါ့မြို့မှာ ဒီဟင်းတစ်မျိုးပဲ စားလို့ရတာကို သတိရမိတယ်၊ ငါ ပထမဆုံး ဂျပန်ခရီးစဉ်က ပြန်လာပြီး ခေါက်ဆွဲထုပ်နဲ့ ဆိုဘာနဲ့ ယာကီတိုရီ နဲ့ တခြားအရာအားလုံးကို ဆက်စားချင်ခဲ့တာ... စိတ်ပျက်စရာကောင်းလိုက်တာ။
ဒါပေမယ့် ကံကောင်းစွာပဲ၊ နေ့စဉ် ဂျပန်ဟင်းလျာတွေက ပိုနီးစပ်လာပါပြီ။ ပြီးရင် ကြည့်လိုက်ရအောင် ပုံမှန်ဟင်းလျာများ.
ကိုယ်ဒါကိုသဘောကျတယ် သွားရည်စား ပြီးတော့ အဲဒါက ငါဝယ်တာ ဘယ်တော့မှ မရပ်ဘူး။ konbiniဂျပန်မြို့ သို့မဟုတ် နေရာတိုင်း၏ စတုရန်းမီတာတိုင်းတွင် လူနေစတိုးဆိုင်များ။
အဲဒါမျိုးပေါ့ ဆန်ညှပ်ပေါင်မုန့် မတူညီသော ဖြည့်စွက်စာများဖြင့် ကြက်၊ ဝက်သား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ တူနာငါးများ ဖြစ်နိုင်သည်... ထမင်းကို များသောအားဖြင့် အရသာရှိပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် အုပ်ထားသော ပင်လယ်ရေမှော်တစ်ချပ်လည်း ရှိသည်။ ထမင်းလုံးများသည် အဝိုင်း သို့မဟုတ် တြိဂံပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်သည်။
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ အမြဲရောင်းတယ်။
ဒီနေ့ အကင် ကိုးရီးယား၊ k-dramas နဲ့တွဲပေမယ့် ဂျပန်မှာတော့ yakiniku ဗားရှင်းရှိပါတယ်။ အသားများကို ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် အရည်အသွေး အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ၎င်းကို ထည့်သွင်းရန် ဖြစ်နိုင်သည်။ နေပြည်တော်ဤနိုင်ငံများတွင် အလွန်တန်ဖိုးကြီးပြီး ဈေးကြီးသော အဆီများသော အသားများ။
အသားများကို သေးငယ်ပြီး ဂန္တဝင်အသားကင်များနှင့် ကွဲပြားသော ဆော့စ်ကို အသုံးပြုသည်။
ဒါက အရမ်းနာမည်ကြီးပြီး ရိုးရာခေါက်ဆွဲမျိုးစုံပါ။ ဟိ zaru soba ပါ ၎င်းတို့ကို ဂျုံဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ငံပြာရည်နှင့် သီးခြားစီ ကျွေးမွေးပါသည်။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို ပါးစပ်ထဲမထည့်ခင် ရေစွတ်လိုက်ပါ။
၎င်းသည် များသောအားဖြင့် ငရုတ်သီးနှင့် ပင်လယ်ရေမှော်များဖြင့် စားသုံးလေ့ရှိပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် ဆိုဘာ သို့မဟုတ် udon ကို အထူးပြုသည့် စတိုးဆိုင်များတွင် ရောင်းချလေ့ရှိသည်။ ရိုးရာစားသောက်ဆိုင်တွေမှာ မကြာခဏဆိုသလို ပျောက်ပျက်မသွားပါဘူး။
ဒါကဖြစ်ပါသည် အမြန်ပန်းကန် ထိုရိုးရာဂျပန်စားသောက်ဆိုင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော ဘားတွင် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထိုင်ကာ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ မှာယူနိုင်ပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ယာကီတိုရီနှင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ကြက်သားအပိုင်းအစများကွဲပြားသောဖြတ်တောက်မှု၊ ဘီယာသည် အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။.
ယာကီတိုရီမှာ အသားအပြင် ကြက်သားကို အကုန်နီးပါးသုံးပါတယ်။ ကိုယ်အင်္ဂါတွေကို စားကြတယ်။ ငံပြာရည်အမျိုးမျိုး၊ ချို၊ ချို၊ ချဉ်၊ အငန်တို့နဲ့ မှာယူနိုင်ပါတယ်... ဥပမာ Negima၊ the momo သို့မဟုတ် tsukune တို့ထက် ပိုလူကြိုက်များတဲ့ yakitori အမျိုးအစားတွေရှိပါတယ်။
Shabu - ရှာဘူ
ဆောင်းတွင်းသွားရင်တော့ အရမ်းအေးတယ်။ ထမင်း အဲဒါက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး အဲဒါကတော့ shabu shabu ဟင်းတစ်မျိုးပါ။ ဟင်းရည်နှင့် ငံပြာရည်တွင် ပြုတ်ထားသော အသားနှင့် အသီးအရွက်များစွာကို ဖြတ်တောက်ထားသည်။. ၎င်းသည် လေးလံသောဟင်းမဟုတ်ပါ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် ၎င်းတွင်ပါဝင်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပမာဏအတွက် အတော်လေး ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည်။
Shabu shabu သည် အလွန်လူမှုရေးဆန်သော ဟင်းတစ်ပွဲလည်းဖြစ်သဖြင့် အိုးတဝိုက်တွင် စုပုံလေ့ရှိသောကြောင့်၊ မီးဖိုချောင်တွင် ဆူပွက်နေကာ စကားပြောရင်း၊
ဒီဟင်းက အကြိုက်ဆုံးဟင်းလို့ ထင်ပါတယ်။ တစ်ခုလောက်ရှိတယ်။ pancake ဂျုံမှုန့်၊ ရေ နှင့် ကြက်ဥအကာတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အလွန်ပူပြင်းသော ဒယ်ပြားပေါ်တွင် သန့်စင်ပြီး ချက်ပါ။ ခြစ်ထားသောသို့မဟုတ်ခုတ်ဂေါ်ဖီထုပ်. ဤဟင်းလျာ၏လူကြိုက်အများဆုံးဗားရှင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟီရိုရှီးမားမှ အိုကိုနိုမီယာကီ၊ ဒါကြောင့် ဒီမြို့မှာ လမ်းလျှောက်သွားမယ်ဆိုရင် စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ဒါပေမယ့် တခြားမျိုးကွဲတွေရှိတော့ အဲဒါကိုခံစားဖို့ ဟီရိုစီဟီမာကို ခရီးသွားဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။
ဒေသတစ်ခုစီသည် မတူညီသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုကြပြီး နေရာတစ်ခုစီတွင် okonomiyaki အရသာကွဲပြားစေသည်။ စျေးမကြီးပါဘူး၊ ပေါများပြီး အရမ်းပျော်တယ်။
ဂျပန်ကိုလျှောက်သွားရင်း ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုရှိရင် ဂျပန်ဟင်းရဲ့ရနံ့ကို ခံစားရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် နေ့လည်စာစားချိန်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတော့ နည်းနည်းတော့ အရသာရှိမယ်ထင်တယ် မကြိုက်ရင် စိတ်တိုသွားလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် နေ့လယ်စာမီနူးတစ်ခုပါ။ အမြဲတမ်းရရှိနိုင်သည်။ အလွန်ရေပန်းစားသောကြောင့် ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးကို သင်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
ဟင်းကိုယ်တိုင်က အရသာပြင်းတယ်၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေရောပြီး အိန္ဒိယ၊ သီရိလင်္ကာ၊ ထိုင်းက ဟင်းတွေရှိတယ်... ဒီမှာ ဂျပန်ဟင်းက ဖြတ်သွား၊ အသားနှင့် အသီးအရွက်များကို ထူထဲနက်မှောင်သော ဆော့စ်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ပန်းကန်ပြား. ထမင်းလည်း စားတာပေါ့။ ဗားရှင်းအားလုံးကြားတွင် အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်။ katsu ဟင်း ဝက်သား သို့မဟုတ် ကြက်သား ဖြစ်နိုင်သော မုန့်ညက်ကြော်၊ အခြမ်းထမင်း နှင့် ဟင်းချဉ်ရည်များစွာ ပါဝင်သည်။
ဟင်းက လေးလံတာမို့ ဘီယာချက်ရင် နောက်မှ ထပ်မသွားချင်တော့ဘူး။
တန်ပူရာသည် အခြေခံအားဖြင့် ဖြစ်သည်။ ကြော်ထားတဲ့အစားအစာ ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ လတ်ဆတ်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ဆီနဲ့ လုပ်ရမှာပေါ့။ တန်ပူရာမာစတာတွေရှိတာကြောင့် သင့်မှာ အိတ်ဆောင်စာအုပ်ရှိရင် အကောင်းဆုံးဗားရှင်းတွေအတွက် ပေးချေသင့်ပါတယ်။ တန်ပူရာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ငါးများပါဝင်သည်။ ဒါကြောင့် ပုဇွန်၊ မုန်လာဥနီ၊ ကန်စွန်းဥ၊ ရွှေဖရုံသီးတို့ကို စားနိုင်ပါတယ်... တကယ်တော့ စာရင်းက အဆုံးမရှိပါဘူး။
တန်ပူရာ ငံပြာရည်၊ ဆား၊ တစ်ခါတရံ ထမင်းနဲ့ တွဲစားပါတယ်။. ခေါက်ဆွဲနဲ့တောင် အော်ဒါမှာလို့ရပေမယ့် အသုံးအများဆုံးဗားရှင်းကတော့ တန်ပူရာတစ်ခုတည်းပါပဲ။ တန်ပူရာကောင်းကောင်း စမ်းချင်ရင်တော့ ဆိုင်ကို သွားကြည့်ပါ။ တန်ပူရာဒါပေမယ့် ယူရို 50 နဲ့အထက် ကုန်ကျမှာပါ ... izakaya မှာ ယူရို6နဲ့ 20 ကြား စျေးသက်သာပြီး တစ်ဦးချင်း ရှောင်လွှဲမှုများအတွက် စျေးနှုန်းပိုသက်သာတဲ့ စူပါမားကတ်များသို့ သွားနိုင်ပါတယ်။
ငါ့ရဲ့ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးဟင်း? ဤဟင်းလျာ၏ အရင်းမြစ်များသည် တရုတ်လူမျိုးများဟု ယူဆရသော်လည်း ယနေ့ခေတ်တွင် ဤဟင်းလျာကို စူပါဂျပန်ဖြစ်လာသော ဤဟင်းလျာကို မကြိုက်သော ဂျပန်လူမျိုး မရှိပါ။ ခေါက်ဆွဲထုပ် အမျိုးအစားများစွာရှိပါတယ်။စတိုင်၊ အရသာ၊ အမျိုးမျိုးသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ရန်ရှိသည်။
ဥပမာ, tonkotsu ခေါက်ဆွဲထုပ် ၎င်းကို ဝက်သားအရိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အလွန်ရေပန်းစားသည်။ အမှန်တရားကတော့ သင်ဘာတောင်းဆိုနေလဲဆိုတာ မသိဘဲ မျိုးကွဲအားလုံးကို စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့၊ သူတို့အားလုံး အရသာရှိတယ်။ အိမ်မှာစားတဲ့ ဂန္တဝင်ကြက်သား ဒါမှမဟုတ် ဟင်းရွက်ဟင်းရည်တွေနဲ့ အရမ်းအရသာရှိပြီး အရမ်းအရသာရှိတဲ့ ဟင်းရည်တွေကို တစ်ခါမှ မမြည်းစမ်းဖူးပါဘူး။
ကောင်းပြီ၊ ဂျပန်၏ပုံမှန်ဟင်းလျာများစာရင်းတွင်၊ ဂန္ထဝင်ပေါင်းစပ်ထားသော ဆူရှီကို ပူဇော်၍မရနိုင်ပါ။ ဆန်နှင့်ငါး. ဆူရှီစားလို့ရတဲ့ နေရာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် အတွေ့အကြုံတစ်ခုခုနဲ့ ကြုံလာတဲ့အခါ အကောင်းဆုံးကတော့ လှည့်ပတ်နေတဲ့ ဆူရှီဝိုင်းနဲ့ အဲဒီစားသောက်ဆိုင်တွေထဲက တစ်ခုကို သွားတာပါပဲ။ ဟိ ဆူရှီလှည့်နေသည်။» ဒါဟာ ပျော်စရာကောင်းပြီး တစ်ခုခုစားရတဲ့ အတွေ့အကြုံကို အမှတ်တရဖြစ်စေပါတယ်။
ဆူရှီမစားချင်ဘူးဆိုရင် စူပါမားကတ် ဒါမှမဟုတ် konbini မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာရှခရီးသွားခြင်း » ဂျပန် » ဂျပန်ရိုးရာဟင်းလျာများ
စပိန်တွင် စုံတွဲအဖြစ် ခရီးသွားရန်နေရာများ